မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့အတွက် အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါဘူး။ - For her Myanmar
လူတိုင်း အရွယ်တိုင်း လှပဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်…
“အသက်ကိုလည်းကြည့်ဦး ကိုယ့်ဘာသာ မိတ်ကပ်လိမ်းသင့်လား မလိမ်းသင့်လားစဉ်းစားပေါ့? အမလေး ဟိုမှာကြည့်စမ်း ငါ့အမေအရွယ်ကြီး မိတ်ကပ်လိမ်းထားလိုက်တာများ ငါ့ထက်တောင် များသေးတယ်…” စသည်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်က အသက်အရွယ်ကို လိုက်ပြီး ခွဲခြားလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား??? ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော မိတ်ကပ်ဘရပ်ရ်ှကို ကိုင်ပြီး ငါလိမ်းတာ သင့်တော်ပါ့မလားလို့ တွေးမိနေပြီလား? အကယ်၍ အဲ့လိုမျိုးတွေ တွေးမိနေပြီဆိုရင် ဒီအတွေးတွေကို အဝေးဆုံးလွှတ်ပစ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်အလုပ်မဆို အသက်ကြီးလို့မလုပ်ရဘူး ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲ ကိုယ့်ခံယူချက်အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတာ မဟုတ်လား..
ချစ်တဲ့ယောင်းလေးတွေရေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တင့်တယ်အောင် နေထိုင်တတ်ရင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်မျက်နှာမှာ အရောင်ကြောင်ကြားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သင့်တင့်လျော်ကန်တဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ခြယ်သထားရင် ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး တင့်တယ်တယ်လို့ ခံစားရရင် စိတ်ချလက်ချသာ လိမ်းလိုက်ပါ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့… နောက်ပြီး လှချင်ပချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြောင့် မိတ်ကပ်မလိမ်းသင့်ဘူး ဘာညာ ရှုံ့ချနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကသာ ရှက်စရာပါ။
Related Article >>> အလုပ်လျှောက်ချင်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် Cover Letter
နောက်ပြီးလူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကိုယ် တည်ဆောက်ခွင့်ရှိပြီး အဲဒီလိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိတ်ကပ်နဲ့ အဝတ်အစားအပြင်အဆင်တွေလည်း ပါတာပေါ့။ ခေတ်ကလည်း တကယ့်ဖလန်းဖလန်းတွေခေတ်ဆိုတော့ ကိုယ်ကအသက်ကြီးနေလို့ဆိုပြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်တို့ပြင်ဆင် ဝါဒကိုလက်ကိုင်ထားရင်း မိတ်ကပ်ပြင်ချင်စိတ်ကို အောင့်အီးသည်းခံပြီး ဒီအတိုင်း နေနေမယ်ဆိုရင် ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု အားနည်းလာတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ချစ်တဲ့ယောင်းလေးတွေရေ… ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ အနေအထားတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းပါပဲ။ ကြည့်ကောင်းနေတဲ့ ကိုယ့်ပုံစံက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပိုပြီးတက်ကြွစတောမို့ အားအင်အသစ်တွေနဲ့ နေ့သစ်တွေကို ကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ပြီး နေသင့်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်တိုင်းမဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တဲ့ Confidence ကို လိုအပ်နေသေးတယ်လေ။
အကယ်၍နှင်းပြောတာ အရမ်းပိုနတေယ်လို့ထင်ရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မှန်ထဲကြည့်ကြည့်ပါ။ အားနဲ့မာန်နဲ့စစ်တိုက်ထွက်မယ့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်ကိုဆောင်နေပါလိမ့်မယ်။ (မိတ်ကပ်ဘရပ်ရ်ှတွေကတော့ သူ့ရဲ့လက်နက်တွေပေါ့။) မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းက ကြီးမားတဲ့အားအင်တစ်ခုကို လက်ကိုင်ထားပြီး အဲဒီအားအင်ရဲ့ အစွမ်းကို ဘယ်သူကမှ တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့။
စစ်ပွဲတွေနွှဲဖို့အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ရသလို ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လည်း တတ်နိုင်သလောက် လက်နက်တွေကို စုဆောင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကျဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအထောက်အပံ့တွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေက ပိုပြီးလိုအပ်တာမို့ သူများအပြောကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖုံးကွယ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ လုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့…
အရွယ်သုံးပါးမရွေး အလှဆုံးသောပန်းတွေ ဖူးပွင့်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…
လူတိုငျး အရှယျတိုငျး လှပဖို့အတှကျ အခှငျ့အရေးရှိပါတယျ…
“အသကျကိုလညျးကွညျ့ဦး ကိုယျ့ဘာသာ မိတျကပျလိမျးသငျ့လား မလိမျးသငျ့လားစဉျးစားပေါ့? အမလေး ဟိုမှာကွညျ့စမျး ငါ့အမအေရှယျကွီး မိတျကပျလိမျးထားလိုကျတာမြား ငါ့ထကျတောငျ မြားသေးတယျ…” စသညျဖွငျ့ ပတျဝနျးကငျြက အသကျအရှယျကို လိုကျပွီး ခှဲခွားလှနျးလို့ စိတျညဈနပွေီလား??? ကိုယျကိုယျတိုငျကရော မိတျကပျဘရပျရျှကို ကိုငျပွီး ငါလိမျးတာ သငျ့တျောပါ့မလားလို့ တှေးမိနပွေီလား? အကယျ၍ အဲ့လိုမြိုးတှေ တှေးမိနပွေီဆိုရငျ ဒီအတှေးတှကေို အဝေးဆုံးလှတျပဈလိုကျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယျအလုပျမဆို အသကျကွီးလို့မလုပျရဘူး ဆိုတာမြိုးမရှိဘဲ ကိုယျ့ခံယူခကျြအပျေါမှာပဲ မူတညျနတော မဟုတျလား..
ခဈြတဲ့ယောငျးလေးတှရေေ… ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တငျ့တယျအောငျ နထေိုငျတတျရငျ လူမှုပတျဝနျးကငျြမှာ အရမျးကို အဆငျပွပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့မကျြနှာမှာ အရောငျကွောငျကွားနတောမြိုးမဟုတျဘဲ သငျ့တငျ့လြျောကနျတဲ့ မိတျကပျအပွငျအဆငျခွယျသထားရငျ ခါတိုငျးထကျပိုပွီး တငျ့တယျတယျလို့ ခံစားရရငျ စိတျခလြကျခသြာ လိမျးလိုကျပါ။ ဘာအကွောငျးကွောငျ့နဲ့မှ တှနျ့ဆုတျမနပေါနဲ့… နောကျပွီး လှခငျြပခငျြစိတျရှိတယျဆိုတာ ရှကျစရာမဟုတျပါဘူး။ အသကျအရှယျကွောငျ့ မိတျကပျမလိမျးသငျ့ဘူး ဘာညာ ရှုံ့ခနြတေဲ့ စိတျဓာတျတှကေသာ ရှကျစရာပါ။
Related Article >>> အလုပျလြှောကျခငျြသူတိုငျး မဖွဈမနေ သိထားရမယျ့ Cover Letter
နောကျပွီးလူတိုငျးမှာ ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြကိုယျ တညျဆောကျခှငျ့ရှိပွီး အဲဒီလိုတညျဆောကျဖို့အတှကျ လိုအပျတာကို ကိုယျတိုငျလုပျယူပိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ မိတျကပျနဲ့ အဝတျအစားအပွငျအဆငျတှလေညျး ပါတာပေါ့။ ခတျေကလညျး တကယျ့ဖလနျးဖလနျးတှခေတျေဆိုတော့ ကိုယျကအသကျကွီးနလေို့ဆိုပွီး ရိုးရိုးယဉျယဉျတို့ပွငျဆငျ ဝါဒကိုလကျကိုငျထားရငျး မိတျကပျပွငျခငျြစိတျကို အောငျ့အီးသညျးခံပွီး ဒီအတိုငျး နနေမေယျဆိုရငျ ကွာလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု အားနညျးလာတာ၊ စိတျဓာတျကတြာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ခဈြတဲ့ယောငျးလေးတှရေေ… ကိုယျ့ရဲ့ပုံစံကိုပွောငျးလဲခွငျးက ကိုယျ့ရဲ့စိတျနဲ့ အနအေထားတှကေိုပွောငျးလဲလိုကျခွငျးပါပဲ။ ကွညျ့ကောငျးနတေဲ့ ကိုယျ့ပုံစံက ကိုယျ့ရဲ့စိတျဓာတျကို ပိုပွီးတကျကွှစတောမို့ အားအငျအသဈတှနေဲ့ နသေ့ဈတှကေို ကောငျးကောငျးဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုရငျကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ ပွငျဆငျပွီး နသေငျ့ပါတယျ။ ဘယျအသကျအရှယျတိုငျးမဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုလို့ချေါတဲ့ Confidence ကို လိုအပျနသေေးတယျလေ။
အကယျ၍နှငျးပွောတာ အရမျးပိုနတယျေလို့ထငျရငျ မိတျကပျလိမျးတဲ့အခြိနျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မှနျထဲကွညျ့ကွညျ့ပါ။ အားနဲ့မာနျနဲ့စဈတိုကျထှကျမယျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အသှငျကိုဆောငျနပေါလိမျ့မယျ။ (မိတျကပျဘရပျရျှတှကေတော့ သူ့ရဲ့လကျနကျတှပေေါ့။) မိတျကပျလိမျးခွယျခွငျးက ကွီးမားတဲ့အားအငျတဈခုကို လကျကိုငျထားပွီး အဲဒီအားအငျရဲ့ အစှမျးကို ဘယျသူကမှ တိုငျးတာလို့မရနိုငျပါဘူးတဲ့။
စဈပှဲတှနှေဲဖို့အတှကျ ပွငျဆငျမှုတှကေိုလုပျရသလို ဘဝရဲ့တိုကျပှဲဝငျဖို့အတှကျလညျး တတျနိုငျသလောကျ လကျနကျတှကေို စုဆောငျးထားဖို့လိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အကဘြကျကိုရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ဒီလိုအထောကျအပံ့တှေ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုတှကေ ပိုပွီးလိုအပျတာမို့ သူမြားအပွောကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဖုံးကှယျလိုကျရတဲ့အဖွဈမြိုးတှေ လုံးဝမဖွဈပါစနေဲ့လို့…
အရှယျသုံးပါးမရှေး အလှဆုံးသောပနျးတှေ ဖူးပှငျ့နိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး…
Tags: Age, confidence, limits, makeup, No, Preparation, weapon
Hnin Ei Oo April 23, 2019
Wathun April 23, 2019